"လူဆိုးလူဆိုးရှာဖွေတွေ့ရှိသောဝတ္ထု" The Footprint of evil "ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကြောင့် X. | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Toni Cortés | | iPhone အတွက် X ကို, အတော်ကြာ
Apple ဘ ၀ ကိုလှည့်ပတ်နေသောနည်းပညာဘလော့တစ်ခုတွင်ပရိယာယ်များနှင့်လူသတ်မှုဝတ္ထုများကိုမှတ်ချက်ပေးခြင်းသည်ထုံးစံမဟုတ်ပါ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ၊ Apple ထုတ်ကုန်များ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ မျက်နှာပြင်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တစ်ထောင်နှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိသတင်းများကိုမှတ်ချက်များပေးခြင်း၊
မနေ့ကငါ«ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီးသည်မကောင်းသောအမှု၏ Imprint»မက်ဒရစ်စာရေးဆရာမှ Manuel Ríos San Martin။ ငါရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ် ဖျက်ဆီးသူမရှိ ဘာကြောင့်ဒီစာကိုဖတ်ဖို့သင့်ကိုဖိတ်ခေါ်တာလဲ
၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီလတွင် Manuel Rios သူ၏ပထမဆုံးဝတ္ထုကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ "စက်ဝိုင်းများ"။ တီဗီပြိုင်ပွဲဝင်တ ဦး သေဆုံးသွားသောရဲတပ်ဖွဲ့သည်ကင်မရာများ၏ရှေ့တွင်နေထိုင်သည်။ လူမှုရေးကွန်ရက်များသည်အလွန်ကြီးစွာသောအခန်းကဏ္ take မှပါ ၀ င်သည်။ အကြောင်းမှာစာဖတ်သူသည်လူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး ၀ တ္ထု၏ဇာတ်လမ်းကိုလိုက်နာရန်သတင်းအချက်အလက်များကိုအွန်လိုင်းမှရယူနိုင်သည်။
ဒီအတိတ်ဇွန်လ သူ၏ဒုတိယစာအုပ်ဖြစ်သော“ မကောင်းမှု၏ခြေရာ” နောက်ထပ်စုံထောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်တွင်ယောက်ျားလေးများသည်တူးဖော်နေသောအမျိုးသမီးငယ်တစ် ဦး ၏အလောင်းကိုတွေ့သောအခါစတင်သည် Atapuercaလွန်ခဲ့သောနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကပြုလုပ်ခဲ့သောမြေမြှုပ်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုတုပသည့် Neardenthal သင်္ချိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူ (၃) ဦး ကဒီကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်၊ အကြောင်းမှာလွန်ခဲ့သော (၆) နှစ်ကသူတို့မဖြေရှင်းနိုင်သောကိစ္စနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။
ယခုအချိန်ထိစာအုပ်ဆိုင်များနှင့်စာကြည့်တိုက်များမှတဆင့်ကူးပြောင်းလာသည့်ရာနှင့်ချီသောရာဇ ၀ တ်မှုဝတ္ထုနှင့်မကြာသေးမီက ebook များရောင်းချရန်ရည်ရွယ်ထားသည့် portals များမှတစ်ဆင့်ကူးစက်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။ ငါဒီစာအုပ်ကိုမှတ်ချက်ပေးတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Apple ပစ္စည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားသူတွေအတွက်အဲဒါကကောင်းတယ်။ ဝတ္ထုတစ်ခုလုံးတွင်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောကိုးကားချက်များ၊ iPhone ကို နှင့် iOS ကိုနှင့်အတူ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ သင်္ဂြိုဟ်ခံပြီးတစ်ရက်အကြာတွင်သားကောင်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုသူတို့တွေ့ရသည် iPhone အတွက် X ကို, ရဲကဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ဖို့သူမကိုတူးဖို့တရားသူကြီးကိုမေး .. ¡Face ID ကတဆင့်!
သူတို့အောင်မြင်မယ်၊ မအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတာငါမထုတ်ဖော်ဘူး။ သင်အသုံးပြုသောစနစ်၏အသေးစိတ်ရှင်းပြချက်ရှိပါသည် Apple မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုသည်။ စာရေးသူသည်ပန်းသီးဖျော်ရည်ကိုသူ၏သွေးပြန်ကြောထဲပြေးလွှားနေသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ အဆုံးမှာတော့လူသတ်သမားကဘယ်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်သလဲဆိုတာသူတို့သိသွားတယ် iPhone ကို X တို့မှာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » အတော်ကြာ » "လူဆိုးလူဆိုးရှာဖွေတွေ့ရှိထားသော" X ၏ဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြသည့်အရာဝတ္ထုတစ်ပုဒ်က iPhone X ၏ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်သည်။